AngelBiss no voalohany eran'izao tontolo izao mifantoka amin'ny fiovan'ny oksizenina concentrator ary koa ny voalohany afaka mifehy tsara ny tahan'ny fiovan'ny oksizena ao anatin'ny 0,1% (mihoatra ny 0,6% ny haavon'ny salan'isa eo amin'ny sehatry ny indostria)
Ao amin'ny fikarohana laboratoara ao amin'ny injeniera AngelBiss dia nahita fa ny tahan'ny fiovan'ny toetr'andro ambany dia midika fa ny concentrator oksizenina dia manana vintana kely kokoa ho an'ny kilema amin'ny faritra mifandraika rehetra, ka hahatonga ilay milina handeha amin'ny fiainana lavorary sy maharitra. Noho izany ny fahamarinan-toerana sy ny kalitao dia samy mahazo antoka amin'ny alàlan'ny teknolojia tokana. Izany no tena manintona ny vokatra AngelBiss anay.
Maherin'ny 17 taona ny fianarana injeniera amin'ny vokatra entona, ny injeniera AngelBiss dia mazoto amin'ny fampandrosoana, fikarohana, fanondranana ary vokatra manara-penitra amin'ny sehatry ny Oxygen Therapy, Therapy Surgery, Therapy Asthma ary Therapy Diagnostic. Miaraka amin'ny tombotsoany manokana momba ny fikarohana sy ny fahaiza-manao injeniera matanjaka, AngelBiss dia nanome vahaolana avo lenta ho an'ny mpanjifa manerantany, ao anatin'izany i Malaysia, India, Iraq, Spain, Netherlands, Ukraine, Chile, Peru, Japan, Australia, sns.
AngelBiss ny vokatra rehetra dia manaraka ny fenitry ny kalitaon'ny Teknolojia USA sy ny fampisehoana tsara indrindra amin'ny androm-piainany elektronika. Ny vokatra dia mahomby sy mora amin'ny tontolo iainana, tsotra hitazomana, izay nanaporofo ny maha-azo itokiana azy amin'ny serivisy marobe manerana an'izao tontolo izao.
AngelBiss miantoka ny fiarovana anao amin'ny fampiasana ny vokatra, manome serivisy fampiasana tsara kokoa ho an'ireo mpankafy mpizara.
AngelBiss dia mizara ny ampahany amin'ny fitantanana, famokarana, fitantanan-draharaha, HR, marketing, R&D fikarohana sy fampandrosoana, fanaraha-maso kalitao, trano fitobiana, serivisy mialoha ny varotra ary aorian'ny fivarotana, Fifandraisana amin'ny famokarana ranomasina, sns. Ny sampana tsirairay dia manao ny adidiny manokana, amin'ny fomba matotra tompon'andraikitra, ary miasa mafy amin'ny asa tsara ataon'ny vondrona. Miaraka amin'ny fanitarana sy fivoaran'ny AngelBiss, dia hanana fizarana mihamaro hatrany izy io hanadiovana.
Sinopec Group Senior Mechanical Designer (SGSMD) & injeniera Andriamatoa Huang dia nanangana ny orinasa SinZoneCare Medical tamin'ny taona 2004 ho an'ny tsena fitsaboana eto an-toerana, izay manao orinasa ODM amin'ny vokatra ara-pitsaboana sy indostrialy. Nandritra izay 14 taona lasa izay, SinZoneCare dia mamolavola ary mamokatra vokatra oksizena am-polony (ho an'ireo orinasan-tsambo any an-toerana) ary mahita fahombiazana lehibe eo amin'ny sehatry ny gazy. Rehefa taona 2017, injeniera tanora mpivarotra Andriamatoa Arvin Du no niditra niaraka tamin'Andriamatoa Huang ary nanomboka niandraikitra ny raharaha raharaham-barotra fanondranana amin'ny anaran'ny AngelBiss. Ny orinasa dia mampihetsika ny fandrosoana manitatra manerantany mandraka androany.
ANGELBISS dia marika manana ny kalitaon'ny AngelBiss Healthcare Inc (USA) sy AngelBiss Medical Technology (Sina). ANGELBISS dia nahavita nisoratra anarana tamina marika tsy manam-paharoa tany California USA, Dusseldorf Alemana ary Shanghai China. Ny hevitry ny marika ary koa ny sandan'ny orinasa dia voalaza toy izao manaraka izao:
Ny fitambaran'ny Angel Broken Wings sy ny marika anglisy ANGELBISS. Ny anjely dia toetra an-tsaina ao am-pon'ny olona avy amin'ny firenena isan-karazany izay mitondra ny filazantsara, ary karazana sakafo ara-panahy. Ny sarin'ny renivohitra "A" dia toa olona fotsiny, ny ilany elatra ihany no mampiseho ny tsy fahafenoany, satria tsy feno ny toe-tsain'ny olona marary, ary io tsy fahafenoana io dia manazava fotsiny fa mila fikarakarana ity olona ity. Biss dia midika hoe Fitahiana. Ny fisehoan'ny avana mena dia midika fa mitondra fanantenana ho an'ny olona ny anjely.
Ary misaotra an'Andriamatoa Foo sy Andriamatoa Joe avy any Malezia nanolotra ny anaran'ny ANGELBISS.